RINDRAMBAIKO AM-PINDAY SY NY ASA SORATRA — Fifaninanana hazavain'i Voamboana Varongy —
Tapatapakahitra nifanaovan'i Heriarilala Andriamamonjy tamin'i Voamboana Varongy
RINDRAMBAIKO AM-PINDAY SY NY ASA SORATRA
— Fifaninanana hazavain'i Voamboana Varongy —
Manam-bahiny ny Pôetawebs, Voamboana Varongy no anarany, mpandrindra ny vondrona "Tahalan'ny Tantara an'Onjampeo" ao amin'ny tambajotra Facebook. I Heriarilala Andriamamonjy no mitafatafa aminy.
TAHALAN'NY TANTARA AN'ONJAMPEO
Faly miarahaba anao, Voamboana Varongy, tonga soa eto amin'ny efitry ny tapatapakahitra. Faly miarahaba antsika rehetra manjohy tsy tapaka ny tranonkala Pôetawebs koa.
Tonga eto ianao Voamboana Varongy hizara ny vaovao avy aminareo ho fanamarihana ity iray volan'ny teny malagasy ity.
Miarahaba ny mpanapatapaka ahitra ary faly ny tenanay amin'izao fanasana izao.
Amin'izao fanamarihana ny iray volan'ny teny malagasy izao, ny Mad-Appli sy ny vondrona Tahalan'ny Tantara an'Onjampeo dia mikarakara fifaninanana tononkalo sy sombintantara. Izy io dia fifantenana ireo asa soratra mendrika ka hampidirina anaty rindrambaiko am-pinday iray ary aparitaka maimaimpoana ho an'ny rehetra.
Inona no nanosika anareo hanao izao dingana izao ary inona no tanjona amin'ilay fifaninanana?
Tsapanay fa mihatanora ny mpanoratra ankehitriny saingy amin'ny maha tanora azy ireo dia ahitana tsy fahamatorana eo amin'ny fanoratana. Izany nefa dia mahatonga ny asa sorany ho ratsy kalitao sy zara fa vita. Etsy andaniny koa, tsy mahazo avarapatana eo amin'ny fiainan'ny Malagasy amin'ny ankapobeny ny literatiora an-tsoratra ka anisany nanosika anay hanao izao tetikasa izao. Maro ny antony fa santionany izay tena misongadina ireo.
Natao izao hetsika izao mba hanaporofoana amin'ny fiarahamonina fa mbola velona izany literatiora izany eto Madagasikara. Tianay ny hampahafantatra ny mpanoratra sy ny pôeta ankehitriny ary hanaparitaka ny literatiora amin'ny alalan'ny teknôlôjia. Mba ho toy ny bokikely ao anaty finday io rindrambaiko vokarina io ka ho azon'ny olona vakina na aiza na aiza ireo asa soratra. Tanjona kendrena koa ny hamoahana asa soratra tsara kalitao sy tsara kaly amin'ny alalan'ny sivana apetrakay. Ary ny tanjona lehibe dia ny fanomezan-kasina sy lanja ny teny malagasy satria takina indrindra amin'ity fifaninanana ity ny fahafehezan'ny mpandray anjara ny teny malagasy.
Iza avy no afaka mandray anjara? Inona no mason-tsivana amin'ilay lalao?
Misokatra ho an'ny rehetra izay afaka manoratra ny fifaninanana fa ny tanora no amporisihana kokoa. Afaka mandray anjara koa na ireo mpanoratra efa fantatra anarana aza.
Tanjona ny hamoaka asa soratra mendrika ka takina ny fahafehezan'ny mpandray anjara ny votoatin'ny asa sorany sy ny endrika anehoana izany. Teny malagasy manara-pitsipika no tsy maintsy hita ary asa soratra ahatarafana ny "kanto".
Anisan'ny misongadina ao amin'ny fampahafantarana nataonareo ny hoe azo andraisana anjara avokoa na asa soratra efa nivoaka boky na tsia. Inona no anton'izay satria ny fahita amin'ny fifaninanana rehetra dia asa soratra mbola tsy nivoaka foana no azo ekena?
Ireo tanora sasany voalaza etsy ambony ireo dia efa namoaka boky saingy tsikaritra foana ny lesoka rehefa vakina ireny boky ireny. Tsy voatery ho mety avokoa ireny asa soratra navoaka am-boky ireny.
Mbola ahitana lesoka eo amin'ny fanoratana ny teny malagasy, ny fanehoan-kevitra, ny fanatrarana ny "kanto", ny hevitra mandringa, ny fenitra takina eo amin'ny tononkalo sy ny sombintantara ets.
Mety mbola hisy tohiny ve ity fifaninanana ity?
Tohizana tokoa izy io ary tsy hijanona fotsiny eo amin'ny tononkalo sy ny sombintantara.
Ampahatsihivo kely àry ny fe-potoana sy ny toerana fandefasana ny fandraisana anjara.
Avantana amin'i Voamboana Varongy ao amin'ny hafatra miafina amin'ny kaonty Facebook na ao amin'ny adiresy mailaka amin'ny menavona@gmail.com ireto zavatra ilaina ireto.
- ny momba ny mpanoratra :
. anarana feno (miaraka amin'ny solonanarana raha misy)
. ny daty sy ny toerana nahaterahana
- sary 02 (sary tapaka na lava)
- ny mampiavaka ny mpandray anjara eo amin'ny fanoratana
(ny foto-kevitra ijoroana, ny fomba fanoratra sns.)
- ny fikambanana idirana (raha misy)
- ireo asa soratra
Nisokatra tamin'ny 30 mey ary hifarana amin'ny 15 jona amin'ny 12 ora alina ny zavatra ilaina.
Azon'ny rehetra atao ny mitsidika ny rindrin'i Fidy Mikanto sy ao amin'i Voamboana Varongy maka ny andinindininy ho an'ireo tsy mbola nahafantatra.
Firy no hahazo fankasitrahana ka ho tafiditra ao anatin'ilay rindrambaiko am-pinday ny asa sorany?
Mpanoratra 30 no fantenana amin'ity andiany voalohany ity. Tokony ho mendrika avokoa ireo asa soratra roa (02) alefan'ny mpandray anjara mba ho isan'ireo hampidirina anaty rindrambaiko am-pinday ny sanganasany.
Ahoana ny toetoetry ny asa soratra?
• Ho an'ny tononkalo : andininy 3 ahitana andalana 4 avy
• Ho an'ny sombintantara : tsy mihoatra ny voanteny 500
• Malalaka ny safidin'ny mpandray anjara :
- na tononkalo 1 sy sombintantara 1
- na tononkalo 2
- na koa sombintantara 2
Inona àry no hafatra avy aminao Voamboana Varongy hamaranantsika izao tapatapakahitra izao?
Ho an'izay handray anjara, diniho sy avadibadiho tsara ireo asa soratra vao halefa mba hananantsika asa soratra tsara kalitao fa tsy fihetseham-po fotsiny ihany. Mampiasà rakibolana na manontania olona havanana amin'ny teny malagasy mba tsy ho diso ny tsipelina.
Ahatarafana ny maha izy azy ny mpamorona ny literatiora koa manentana antsika mba tsy hanao kitoatoa eo amin'ity sahaben'ny literatiora ity.
Misaotra ny tranonkala Pôetawebs ihany koa nanasa ary ho ela velona anie ny literatiora malagasy sy mpamorona.
Mpandrindra : Toetra Ràja